Home News Baarlamaanka oo ka doodi doono mooshin la xiriira heshiisyaddii uu dhawaan...
Baarlamaanka oo ka doodi doono mooshin la xiriira heshiisyaddii uu dhawaan soo saxiixay
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka Somaliya ayaa diyaariyay Mooshin ka dhan ah heshiisyada Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo uu la galay dowladaha caalamka qaarkood.
Xildhibaanadan hadda ku saxiixay laakiin laga yaabo in ay ka bataan aya tiradooda ay gaareyso 10 Xildhibaan. Kuwas ayaa warqad ay qoreen waxa ay ku muujiyeen walaac ay ka qabaan Heshiisyada is afagarad ee lala galay dowladaha Shisheeye.
Waxa ay ku muujiyeen warqadooda in loo baahan yahay heshiisyadadaasi dood in laga furo oo Golaha Shacabka ay ka doodaan.
Xildhibaan C/fataax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha ku saxiixan Warqadan ayaa sheegay in maalinta Sabtida ay hor keeni doonaan Golaha Shacabka Mooshinkaasi si baarlamaanka uu uga hadlo.
Mooshinkaani ayaa waxaa uu imaanayaa xili isbadal siyaaadeed uu ka socdo Geeska Afrika, ka dib markii madaxda dalalaka Ereteria, Itoobiya iyo Soomaaliya ay yeesheen wadahadalo maalmo socday oo lagu qabtay Magaalada Bahardar ee dalka Itoobiya.
Previous articleMadaxweyne Gaas “Dowladda Farmaajo waa in aay joojisaa faragelinta Puntland”
Next articleMadaxweyne Kenyatta oo warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan
Severe water shortages in Somalia leave 70% of families without safe...